तपाईंको सास गन्हाउँछ भने यसो गर्नुस्… – दैनिक नेपाल न्युज
मङ्लबार, माघ ४, २०७८ | Tuesday 18th January 2022
तपाईंको सास गन्हाउँछ भने यसो गर्नुस्…
प्रकाशित द्वारा: मङ्लबार, चैत्र २५, २०७६
डा. प्रकाश बुढाथोकी, वरिष्ठ दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवल – मोजा, काखी र सास गन्हाउने व्यक्तिगत समस्या हुन्। तैपनि यो समस्याले अरुलाई अप्ठ्यारो पार्छन्। मोजा गन्हाएमा धोएर, सफा गरेर वा जुत्ता नै बदलेर समाधान गर्न सकिन्छ। तर, सास गन्हाउँछ भन्दैमा मुख नखोली बस्न सकिँदैन। सास गन्हाउने समस्याले आफूसँग हिँडडुल र उठबस गर्ने साथीसंगीलाई हैरान पार्नुका साथै स्वयं व्यक्ति पनि हीनभावनाले ग्रसित हुनसक्छ। त्यसैले यो रोग आफू र अरुका लागि पनि समस्या हो भनेर चिनिन्छ।
यो रोग के हो?
मुख वा नाकबाट अपवित्र वा अशुद्ध, नराम्रो, मन नपर्ने गन्ध आउने अवस्थालाई हेलिटोसिस वा ब्याड बे्रथ वा सास/मुख गन्हाउने रोग मानिन्छ। सास गन्हाउने अवस्था आफैंमा रोग नभई यो सामान्य अवस्था वा शरीर तथा मुखमा भएको रोगहरूको लक्षण वा औषधी प्रयोगको असर हुनसक्छ। त्यसकारण सास गन्हाउने अवस्थाले शरीरमा भएका अन्य रोगहरूको जानकारी दिएर ‘मुख शरीरको ऐना हो’ भन्ने भनाईलाई पनि चरितार्थ गर्छ।
मेरो अनुभवमा सास गन्हाउने बिरामी तीन प्रकारका हुन्छन्।
– आफ्नो सास गन्हाएको थाहा नपाउनेहरू
– आफ्नो सास गन्हाएको थाहा पाएर पनि त्यसप्रति चिन्ता नगर्नेहरू
– आफ्नो सास गन्हाएकोमा चिन्तित हुनेहरू।
विवाहको लगन भएको बेला यस्ता बिरामी बढी आउने गरे पनि जीवनसाथीको सिकायतले सधैंजसो आउने गर्छन्। नेपालमा गिजासम्बन्धी रोग, दाँतमा कीरा लाग्ने, पछि सास गन्हाउने समस्या लिएर आउने बिरामी हुन्छन्।
के–के कारणले हुन्छ?
बुढापाका र सुघ्ने नसाको भ्रम भएकाहरूमा सास गन्हाउने समस्या नभए पनि मानसिक कारण तथा भ्रमले उनीहरूलाई सास गन्हाएको भान हुन्छ। यसलाई कारण नभएको अवस्थाको सास गन्हाउने अवस्था मानिन्छ। कारण भएको सास गन्हाउने अवस्थालाई तीन भागमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।
(१) सामान्य अवस्था : बिहान उठ्नासाथ, भोको/ब्रत बसेको अवस्थामा, खानामा प्रयोग गरिएका वस्तुहरू जस्तैः चिया, कफी, मकै, प्याज, लसुन. रक्सी, बोसो, भुटेको खाना आदिले सामान्य अवस्थामा पनि सास गन्हाउँछ। नक्कली दाँत लगाएर सुतेमा, नाकको सट्टा मुखबाट सास फेरेमा, नमिलेका कृत्रिम दाँत लगाएमा, भोको वा ब्रत बसेको बेलामा पनि साधारण अवस्थामा पनि सास गन्हाउँछ।
(२) रोगसँग सम्बन्धित –
(क) मुख, दाँत तथा घाँटीसँग सम्बन्धित रोग : – मुखको स्वास्थ्य कमजोर भएमा, दाँत कीराले खाएमा, दन्तहर्षा, पाइरिया, दाँत छिचरा भएमा, जिब्रो खस्रो र बाक्लो भएमा, दाँत नमिली बसेमा, मुखमा भएका घाउ खटिराको संक्रमण भएमा र दाँत निकालेपछि घाउ, पिनास, टन्सिलाइटिस, घाँटी दुख्ने, नाक तथा घाँटीको क्यान्सर आदिले सास गन्हाएको हुनसक्छ।
(ख)शरीर तथा शरीरका प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग : – फोक्सोका रोगहरू लंग अवशेष, क्षयरोग, ब्रोन्काइटिस आदिका कारण पनि सास गन्हाउँछ। मासिकश्राव हुँदा दुखाइ, पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित रोग जस्तैः ग्यास्टाइटि्रस, कलेजोको रोग, मिर्गौलासम्बन्धी रोग, चिनीरोग, ज्वरो, रगतसम्बन्धी रोग, संक्रमण, भिटामिनको कमी, कब्जियत आदिले सास गन्हाउन सक्छ।
(३) औषधीको प्रयोग : एन्टीहिस्टामिन, एन्टीक्यान्सर, एन्टीबायोटिक, एन्टीकोगुलेन्ट, एन्टीकोलिनर्जिक र मानसिक रोगका औषधी प्रयोग गर्दा पनि सास गन्हाउँछ।
(४)थुक कम आउने अवस्था– थुक निकाल्ने ग्रन्थीहरूको रोग, क्यान्सरको उपचार, औषधीको प्रयोगले थक कम आई सास गन्हाउन सक्छ।
कसरी थाहा पाउने?
१. यदि तपाईंलाई रुघा लागेको छैन र नाक ठीक छ भने आफ्नो हात मुख अगाडि राखेर त्यसमा सास फेर्नुहोस्। हातमा ठोक्किएर फर्केको सास नाकले भित्र तानी हाल्नुहोस्। यसबाट तपाईंले आफ्नो सास गन्हाएको वा नगन्हाएको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
२. आफ्नो सास गन्हाएको वा नगन्हाएको, आफ्नो अतिनजिकका व्यक्तिहरू पति, पत्नी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सहपाठीसँग सोधर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
३. आफूप्रति अरूको व्यवहार हेरेर, मनन गरेर। जस्तैः बोल्दा नजिकमा बसेका व्यक्तिले अनुहार बिगार्ने, अलि पर बस्न खोज्ने, कुरामा ध्यान नदिने र नाक पुछेजस्तो गरी नाक थुन्ने व्यवहार गरेमा।
उपरोक्त तरीकाबाट सास गन्हाएको वा नगन्हाएको पत्ता मात्र लाग्छ। तर, कति भनेर नाप्न ब्रेथएनालाइजर लगायत उपकरण प्रयोग गरिन्छ।अन्तमा, सास वा मुख गन्ध आउने अवस्थालाई एक अर्काको पर्यायको रूपमा लिए पनि यदि व्यक्तिको नाक ठीक छ र श्वासप्रश्वास प्रक्रिया नाकबाटै हुन्छ भने सास वा नाक गन्ध आउँदा शरीरका प्रणालीसँग सम्बन्धित कारणले हुन्छ।
मुखबाट गन्ध आयो भने मुख र घाँटीसँग सम्बन्धित कारण हुने भएकोले सम्बन्धित रोग विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ। अस्थायी रूपमा सास गन्हाउने समस्यालाई चुइङ्गम, माउथवास, ल्वांग सुकुमेल चपाएर रोक्न सकिन्छ। चिकित्सकलाई जचाएर रोगको कारण पत्रा लगाई उपचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
PM Oli calls UAE Crown Prince, talks about protection and treatment of Nepalis
आँखा पोल्ने ९ कारण र ७ लक्षण, उपचार के?
एजेन्सी । स्वस्थ आँखा तथा सामान्य दृष्टिका लागि आँसु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ। आँखाको नानीको बाहिरी सतहमा (प्रि कर्नियल) आँसुको पातलो सतह (टियर फिल्म) ले लेन्सको काम गरी सामान्य दृष्टि (नर्मल [...]
दमौली, ३ माघः तनहुँका सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन अनिवार्यरुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही माघ ७ गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा सेवा [...]
मेवा खाने सहि समय कुन हो ?
एजेन्सी । मेवा सबैभन्दा लाभदायक फलहरु मध्ये एक हो। यसलाई काँचो, फलफूल, स्मूदी, मिल्कसेक र तरकारीको रूपमा खान सकिन्छ। यो फलको उच्च पौष्टिक र औषधीय मूल्यको लागी लोकप्रिय छ। मेवा [...]
बढ्यो कोरोनाः छैन अक्सिजनको जोहो
गलकोट, ३ माघः अहिलेसम्म बागलुङमा अक्सिजनको जोहो हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अक्सिजनको व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिले अक्सिजन सिलिण्डर जम्मा गरेर [...]
सधैं जवान रहन यो चिज प्रयोग गर्नुहोस् !
एजेन्सी । ओकिनावाको रिकुसे विश्वविद्यालयका कृषि विज्ञानका प्राध्यापक शिन्किची तावाडा पपले गाटो पहेंलो-खैरो रंगको विशेषता रहेको ‘गाटो’ बोट निकालेर दीर्घायु र दीर्घायुको रहस्य पत्ता लगाएका छन्। अदुवा परिवारको विशेष बिरुवा [...]
मेथीको दाना भिजाएर खाँदा हुन्छ आश्चार्य जनक फाइदा
एजेन्सी । मेथी हाम्रो खानामा तरकारी देखि पराठा सम्म धेरै प्रयोग गरिन्छ। यसको पात र बीउ भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदमा शताब्दीयौंदेखि औषधीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। मेथीमा क्यारोटिन, कपर, [...]
यौ’नाङ्ग स्वस्थ्य राख्न महिलाले जान्नै पर्ने आठ कुरा
दुर्घटना घाइतेको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार
कुइन्स रेष्टुराँबाट लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित चार पक्राउ
देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६७३४ सङ्क्रमित, तीन जनाको मृत्यु
रामप्रसाद खनालको यस्तो छ नयाँ गतिको तयारी
मोटरसाइकलको ठक्करबाट ६१ वर्षीया महिलाको मृत्यु